Maxaa keenay biyo la’aan ka jirta Delhi? - BBC Somali
Maxaa keenay biyo la’aan ka jirta Delhi?
Magaala madaxda dalka India ee Delhi ayaa waxa la soo gudboonaaday biyo la'aan ba'an ka dib rabshado ka dhacay gobolka deriska la ah ee Haryana.
Xaafadaha qaar ee magaaladaasi ayaa waxaa la bilabay in loo kaltamo biyaha ka dib markii qowmiyadda Jaad ee ugu badan gobolkaasi ay dibad baxyo dhigeen halkaasina ku burburiyeen kanaal biyaha u qaadi jiray magaalada Delhi.
Magaaladaasi Delhi waxaa deggan Soomaali badan waxaana ka mid ah Cabdifataax Aadan Dibbad, khadka taleefoonka ayuuna ugu warramay weriyaha BBC-da Xasan Cali Geele oo ugu horreyntii weydiiyay halka ay magaalada markii hore biyaha ka heli jirtay.